मोदी पनि अक्षय कुमारको फयान
बलिवुडका तारा, चर्चित एवम् खेलाडी वोय भनेर प्रख्यात अक्षय कुमारको फिल्मको मन पराउनेहरु कमै भेटिएला । अक्षय कुृमारको फिल्म प्रायः हिट नै हुने गरेको छ । जस्तो सुकै फिल्म पनि अक्षयको १०० करोडको क्लबमा आफनो नाम दर्ज गराउन सफल देखिएको छ । बलिवुड
इन्टरनेट रेकर्ड तोड्ने शाहरुख–सलमानको एक फोटो भारइल
वलिवुडका वादशाह भनिने शाहरुख खान र सलमान खानको एक तस्विर इन्टेरनेटमा भाइरल भएको छ । बलिवुडका सर्वाधिक चर्चा रहेका दुई खानको तस्विरले इन्टरनेटमा धमाल मच्चाएको छ । एसआरके अर्थात शाहरुख खानले भर्खरै सलमान खानसंगको तस्बिर आफनो ट्विटर एक्काउण्ट
रहिनन् भेट्रान नाट्यकर्मी तथा अभिनेतृ सुलभा देशपाण्डे
बलिउडले भेट्रान नाट्यकर्मी तथा अभिनेतृ सुलभा देशपाण्डे रहिनन । लामो समयदेखि रोगले थलिएकी उनको शनिबार साँझ मृत्यु भएको हो । देशपाण्डेले अन्तिम सास मुम्बईस्थित आफ्नै निवासमा फेरेकी थिइन्। धेरै मराठी नाटकमा अभिनय गरेकी उनले हिन्दी नाटक तथा
बलिउडका चर्चित कमेडियनको निधन
बलिउडका थुप्रै सफल चलचित्रमा आफनो कमेडी शैलीले दर्शकलाई हसाँउन सफल कलाकार रज्जाक खानको निधन भएको छ । उनलाई “कमेडी नाइट्स विथ कपिल”मा “गोल्डेन भाई”को नामले बोलाइन्थ्यो । रज्जाक खान कलाकार अजीतका छोरा हुन् । मुम्बइको एक अस्पतालमा उनको निधन भए
“सुल्तान”का कारण सलमान र आमिरको दुरी बढ्यो
बलिउडका दुई चर्चित नायक सलमान र आमिर खान मिल्ने साथी मानिन्छन् । सलमान र आमिरको मित्रताको बिषयमा चर्चा पनि खुबै हुने गरेको छ । विशेषगरि, नायक साहरुख खान र सलमान खानको लडाई चल्दा आमिर सलमान निकट थिए । तर, अहिले एक चलचित्रका कारण सलमान र आमिर
भूवनले मागे ९० लाखको क्षतीपूर्ती
नायक तथा निर्माता भूवन केसीले निर्देशन गरेको चलचित्र “ड्रिम्स”को पाइरेसी हाइलाइट्स नेपालबाट भएको बताएका छन् । यो चलचित्रको युटुब राइट्स भूवनले हाइलाइट्स नेपाललाई वेचेका थिए । चलचित्र रिलिज भएको एक बर्षपछि युुटुबमा राख्ने संझौता भएको भूवनले
सलमान र लुलियाको विवाह सम्भव होला ?
रुमानियाली मोडल लुलिया वन्तुरसंग नाम जाडिएपछि सलमान र लुलियाको विवाह हुने हल्ला चल्यो र त्यत्तिकै सेलायो । अहिले बलिउडमा फेरि लुलिया-सलमानको ‘विवाह हुने’ विषयमा बहस सुरु भएको छ । केही भारतीय मिडियाले उल्लेख गरे अनुसार अहिले सलमान ‘सुलतान’
आफ्नो फिल्म लिएर अष्ट्रेलिया आए भुवन र अनमोल
सदाबहार नायक भूबन केसी र उनका छोरा तथा चर्चित नायक अनमोल केसी अष्ट्रेलिया आइपुगेका छन । बुधवार राति बाबु छोरा सिड्नी झरेका हुन । आफ्नो हिट चलचित्र ड्रीम्स लिएर बाबु छोरा अष्ट्रेलिया आएका हुन । यो चलचित्रको प्रर्दशनीको यहाँ भब्य तयारी भैरहेक
सात वर्षपछि हिरामायाको जोवन देखेर केटा पल्कियो
नेपाली सांगितिक क्षेत्रमा नयाँनयाँ अनुहार दिनप्रतिदिन आइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा सामना गर्नुपर्ने विभिन्न बाधा, अड्चनका कारण सबैजना टिकिरहन भने सक्दैनन् । तर सांगितिक दुनियाँमा नै आप्mनो परिचय बनाउन चाहनेहरु यो क्षेत्र छोड्न सक्दैनन् । त्यस
अवतारको पाँचौ भाग समेत आउने
सन् २००९ को सुपरहिट चलचित्र अवतारको पाँचौ भाग समेत रिलिज हुने घोषणा गरिएको छ । यसअघि चलचित्रको तीन नयाँ सिक्वेल बनाउने निर्माण पक्षले बताएको थियो । तर निर्देशक जेम्स क्यामरुनले ३ वटा सिक्वेलमा यस चलचित्रको कथावस्तु पूर्ण नहुने भन्दै पाँचौ
उनले गायक रामकृष्ण थापासँग मिलेर गाएको ‘मायाको बदनाम हरे राम राम’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । रेशम अधिकारीको शब्द रहेको गीतमा संगीत रामकृष्ण थापाकै रहेको छ । नरेन्द्र वियोगीले म्यूजिक एरेन्ज गरेको गीतको रकेर्डिङ भिडियो बनाइएको छ । भिडियो
सन्तान हरु फर्की आउ आफ्नै माटोमा रमाउ ?
बिदेसिनु रहर हैन बाध्यता हो तर आमाको ममताको ले छोरा छोरी कहिले आफ्नो आँखा बाट टाढा नहुन भन्ने चाहान्छिन। देश को बिधमान अबस्था र गरिबिको कारण ले लाखौ युबा युवती बिदेसी रहेकाछ्न। खोले फाडो गुन्द्रुक ढिडो खाउला बरु ,बिदेस हैन आफ्नै देस फर्की
जीयालाई भूवनले किन दिए यति ठूलो स्थान ?
आखिर नायक भूवन केसी र नायिका जीया केसीविच त्यस्तो के सम्बन्ध छ, जसले गर्दा कुनै समयमा चलचित्रको पर्दामा हट दृश्य दिएर चर्चामा आएकी केसीलाई भूवनले यति ठूलो स्थान दिए रु शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको भूवन केसी निर्देशित चलचित्र ‘ड्रिम्स’ हेरेर
बलिउडमा अहिले स्टार र राम्रो बिषय भएका चलचित्रलाई राम्रो कमाई गर्न खासै समस्या छैन । कुनै बेला निर्माताहरु चलचित्रको बक्स अफिसबाट आउने कमाइमै चित्त वुझाइरहेका हुन्थ्य । तर, अहिलेका निर्मातालाई चलचित्रको चर्चा राम्रो भएको खण्डमा पैसा कमाउने
नायिका दिब्या भारतीको हत्या की मृत्यू ?
१७ वर्षको उमेरमा तेलुगु चलचित्रवाट करिअर सुरु गरेकी बलिउड नायिका दिब्या भारतीको विवाह गरेको ११ महिनापछि निधन भएको थियो । उनको निधन कसरी भयो अहिलेसम्म खास कारण पत्ता लागेको छैन । कतिले भन्छन् उनको आत्महत्या हो, कतिले दुर्घटना भनेका छन् त